I-kernel yeLinux yamva nje iyahambelana neApple M1 esele ikwimvavanyo | Ndisuka mac
I-Apple M1 yamva nje ehambelana neLinux Kernel Sele ikuVavanyo
Sine-chip nathi ixesha elide Iapile M1. I-chip entsha eguqula iikhompyuter ze-Apple zibe ngoomatshini bokwenyani. Ayisiyo iMacs kuphela, iPad Pro Pro entsha ibonisa ukuba lirhamncwa. Iinkqubo kunye nabaphuhlisi babeka iibhetri ukwenza ukuba iinkqubo zabo zihambelane nolwakhiwo olutsha kwaye kancinci kancinci ziyaphunyezwa. Into yokugqibela yile iLinux kernel yamva nje yazisa ukungqinelana kokuqala neApple M1.
Inguqulelo yamva nje yeLinux kernel, iLinux 5.13, inika inkxaso ngenkqubo ye-M1 ye-Apple-on-chip kwaye ngoku Iyafumaneka njengohlobo lwetyala lokukhululwa kokugqibela. I-Linus Torvalds, ibhengeze ukuba ingxelo yomgqatswa wokukhululwa iyafumaneka kuvavanyo lukawonkewonke.
Nangona i-IT kwaye ngakumbi iingcali zezokhuseleko zikwazile ukumilisela ngempumelelo iLinux kwiApple Silicon kwixa elidlulileyo, zazifuna izisombululo ezinobuchule. Ngenkxaso yokuqala kwiLinux 5.13, ukuhanjiswa kweLinux kunye neenkqubo ziya kuba nokuninzi Kulula ukuqhuba kwi-SoC ye-Apple.
Ukongeza kwinkxaso ye-Apple Silicon, i-Linux 5.13 kernel ikwanomkhosi weqela labaqhubi abatsha nabahlaziyiweyo kunye nolunye uphuculo lwangaphakathi kwinkqubo yefayile. Uyilo, izixhobo kunye nolawulo lwenkqubo, phakathi kolunye uhlaziyo olutsha. Inguqulelo yokugqibela yeLinux 5.13 kufuneka ikhutshwe eluntwini ngasekupheleni kukaJuni okanye ekuqaleni kukaJulayi. Oko kuyakuxhomekeka ekubeni zingaphi iinguqulelo zokuqala ogqiba ekubeni uzikhulule kwaye ke kuvavanyo, ngexesha lomjikelo wophuhliso naphambi kokukhutshwa kwenguqulelo yokugqibela.
Njengoko besitshilo ngaphambili, kancinci kancinci inkqubela phambili entsha iyenziwa. Ukuba yena inyathelo elitsha eliya phambili lilula ngokuhambelana kweLinux neApple Silicon, Ezi ziindaba ezilungileyo kakhulu. Ingakumbi kuzo zonke iingcali zokhuseleko ezisebenzisa le nkqubo yokusebenza ukusebenza nokuphuhlisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple M1 yamva nje ehambelana neLinux Kernel Sele ikuVavanyo
I-Nomad Rug Pet Pet kunye ne-KeyChain ye-Rugged yee-AirTags